Ungasinyanzela njani ukuyeka isicelo kwiMacBook Pro 2016, ukuba iTouch Bar ayiphenduli | Ndisuka mac
IiMacOs yenye yeenkqubo zokusebenza ezizinzileyo esinokuzifumana namhlanje. Oku kuthetha ukuba ukutyibilika nokulula kweenkqubo kucokisiwe. Nangona kunjalo, kukho ukungafani, njengamaxesha apho i-app ingaphenduli kwaye kufuneka siyinyanzele ukuba iphume. Enye yezinto zokuqala endizifumene xa ndiqala ngeMac, sisantya inkqubo evala ngaso, ukuze ndikwazi ukuyivula kwangoko. Kodwa mhlawumbi le nkqubo inokuba nzima kwiMacBook Pro 2016 entsha, kuba isitshixo sokubaleka, siyimfuneko ukuze sisebenze ulandelelwano Cmd + Alt + ukubaleka, kwaye ngenxa yoko ubhengeza ukuphuma kwamandla kweapp, isenokungafumaneki. Senza ntoni ke?
Okokuqala, unokuyihlaziya i-Bar Bar, ngomyalelo wesiphelo. Yivule kwaye ufake ulandelelwano olulandelayo:
I-pkill «Ummeli weTouch Bar»
Ibha kufuneka iqale kwakhona kwaye iqhosha lethu ekudala lilindelwe liya kubakho kwakhona.
Kodwa ngamanye amaxesha ingxaki iphinda ibuye. Ngokubanzi oku kuyenzeka xa isicelo sinesiphene, esithintela ukuba siqhubeke njengoko kufanelekile. Kwimeko apho, inyathelo elidlulileyo lingenakwanela kwaye kuya kufuneka siye kwisicelo sendabuko ukunyanzela ukuphuma kwezicelo. Kwimeko apho, kufuneka silandele la manyathelo alandelayo:
Kuya kufuneka uye ngasentla ngasekhohlo, kwaye Cofa kwisimboli yeApple.
Khetha ukhetho "Nyanzela ukuphuma" ngaphakathi kokukhethwa kwimenyu.
Khangela kwaye ucofe usetyenziso olukubangela iingxaki ukuqhubeka kwaye ufuna ukuvala, kuba ngekhe uqhubeke nomsebenzi.
Ke Nqakraza kwiqhosha «Force Yeka».
Isicelo siza kuvalwa kwangoko. Unokufikelela kwinqanaba le-3 ngonqamlezo lwekhibhodi enobuchule. Khumbuza ukuba le ndlela imfutshane yile: Cmd + Alt + ukubaleka.
Ukugqiba apho siqale khona, umxholo weli nqaku akufuneki ukuba usetyenziswe rhoqo, kwaye ukuba oku kwenzeka rhoqo, kusenokufuneka sibone ukungqinelana okanye ukufakwa kwale sicelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Ungasinyanzela njani ukuyeka isicelo kwiMacBook Pro 2016, ukuba iTouch Bar ayiphenduli